Tamron Hall anotungamira pamberi paamai-shamers mune yekushambira pikicha nemwanakomana - Nhau
Kuru Style Macelebs Blog Nhau
Tamron Hall anotungamira pamberi paamai-shamers mune yekushambira pikicha nemwanakomana
NeMuvhuro mangwanani, Tamron Hall akatumira mufananidzo unonakidza wepadziva pamwe nemwanakomana wake achangozvarwa Moses, asi akabuda pamberi pevamhamha vanyengeri avo vangadai vakamushoropodza nekusaisa ngowani pamwana.
Amai mirai kunditsvoda shamwari dzangu dzinokuonai! Muvhuro kurudziro… 'Rudo'. #mosesandmama International Moses. Anofara Muvhuro Yall. @tamronhallshow kuzorora kwapera. (FYI akapfeka ngowani yezuva rwendo rwese kunze kweichi chechipiri, hapana vacheche vakakuvadzwa mukugadzirwa kwemufananidzo uyu) @anguilla_tourism
Chinyorwa chakagovaniswa na Tamron Hall (@tamronhall) pana Jul 1, 2019 pa6: 02 am PDT
'FYI akapfeka ngowani yezuva rwendo rwese kunze kweichi chechipiri, hapana vacheche vakakuvadzwa mukugadzirwa kwemufananidzo uyu,' amai vatsva akaisa chinyorwa chinonakidza chekutsvoda kwake mucheche-akapfeka achangoberekwa.
Vateveri vaTamron mazana matanhatu nemakumi matatu evateveri ve Instagram vakaita kunge vaida chinyorwa. Mumwe akanyora, 'Ini ndinoda izvi !! kuisa internet trolls munzvimbo yavo vasati vatombotanga !!' Mumwe akawedzera, 'Lol @ PSA !!!! Nekuti unoziva ruvengo IG meseji dzaiuya !!!
'Iwe hauna chikwereti nemumwe wevatsoropodzi chero tsananguro pane zvaunoita nemwana wako,' mumwe akadaro.
Zvichida kuratidza kuti mudiki wake aive akapfeka ngowani, akazotumira foto inotapira yemurume wake mudiki achitamba fedora.
sandra nzombe uye bryan randall 2017
Kwete chokwadi kana International Moses akapfeka ngowani yemombe kuOld Town Road kana Fedora kuve Rico Suave. Ndatenda @belmondcapjuluca nerunako rwendo rwekutanga rwemwana. Ndatenda Kennedy V. & Gwen nerudo uye kutarisirwa kwakakosha. Anquilla adzoka! Yakagadzirirwa trunks neheti #buybuybaby Stylist Official May Luv lol #sonshine
Chinyorwa chakagovaniswa na Tamron Hall (@tamronhall) pana Jul 1, 2019 pa8: 08 am PDT
Nepo vazhinji vakaona pikicha yedziva raTamron seyeyemurika amai-mwanakomana nguva, vamwe vateveri vakangoshamiswa neyaimbova 'Nhasi' show host mune yake yemaruva swimsuit, vachiona kuti muviri wake wakadzokera kumashure nekukurumidza kubva pakuberekwa kwaMosesi.
Paul Zimmerman / REX / Shutterstock
Tamron akazivisa muna Kubvumbi kuti iye nemurume wake, mutungamiriri wemimhanzi Steven Greener, vaive akatambira mwana mukomana .
Iye aimbove 'Nhasi' anomiririra achagadzirira kutanga hurukuro yake yakabatana, 'Tamron Hall,' munaGunyana 9.
Anofara Wechina waJuly! Ona kuti nyeredzi dziri kupemberera sei Independence Day 2017
Valentino anoti chipfeko chaMai Gaga cheGolden Globes chakabiwa
ndiani mukomana ari lea michele
caitlyn jenner anoda kuve murume zvekare
jenner anoda kuve murume zvakare
taraji p henson rudo hupenyu
imbwa bounty muvhimi mukadzi mukadzi pamberi nepashure